Ra'iisul Wasaare Rooble oo caqabadaha ka jira doorashada kala hadlay Beesha Caalamka - Home somali news leader
Home NEWS Ra’iisul Wasaare Rooble oo caqabadaha ka jira doorashada kala hadlay Beesha Caalamka
Ra’iisul Wasaare Rooble oo caqabadaha ka jira doorashada kala hadlay Beesha Caalamka
Ra’iisul Wasaaraha Xilka haya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilo ka socda Beesha Caalamka oo uu hoggaaminayay Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan.
Kulankan ayaa looga hadlay is mari waaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada iyo sidii caqabadaha ku horgudban looga gudbi lahaa.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku daabacay waxaa uu ku sheegay in isaga iyo Beesha caalamka is weydaarsadeen sida looga gudbi karo caqabadaha jira.
“Waxaan Wakiillada Beesha Caalamka la yeeshay kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaan is dhaafsannay aragtiyo ku aaddan habka ugu habboon ee looga gudbi karo caqabadaha jira, qabsoomidda doorasho si nabad ah ku dhacda & dhowrista xasilloonida guud ee dalka”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.
Beesha Caalamka ayaa dadaalo aan kala go’ laheyn wada, iyadoo si gaar ah dadaaladan u wadaan Wakiilka Qaramada Midoobey, Wakiilka Midowga Afrika, Safiirka Midowga Yurub, Talyaaniga iyo Sweden, kuwaasoo labadii maalmood la kulmayay dhinacyada siyaasadda, iyagoo kala hadlayay sidii loo gaari lahaa xal rasmi ah.
Previous articleFrench police on high alert after teenagers stabbed to death in gang fights
Next articleFrance believes that new local barriers prevent the ‘deteriorating’ situation in Covid-19